South Asia and Beyond: कान्तिपुरको ‘पेटमा पाइप’ समाचारबारे पत्रकारको आत्मस्वीकृतिः खास समस्या काउन्सेलिङको कमी थियो
कान्तिपुरको ‘पेटमा पाइप’ समाचारबारे पत्रकारको आत्मस्वीकृतिः खास समस्या काउन्सेलिङको कमी थियो
समाचारको शीर्षकः अप्रेसन गर्दा पेटमै पाइप छाडियो
समाचार लेख्ने पत्रकारको आत्मस्वीकृतिः पाइप (स्टेन्ट) उपचारको हिस्सा हुन सक्छ तर बिरामीलाई राम्रो काउन्सेलिङ भएन ( तल हेर्नुहोस्, फेसबुकमा एक चिकित्सकसित चलेको गम्भीर सम्वाद)।
यो समाचारको शीर्षक यस्तो हुनुपथ्र्योः अप्रेशन गर्दा मिर्गौलामा स्टेन्ट राख्दा काउन्सेलिङको अभाव ।
तर त्यस्तो समाचारलाई न्युज एडिटरले प्राथमितामा राख्दैनथे । आफ्नो समाचारलाई मुखपृष्ठमा ल्याउन यी पत्रकार भाइले पत्रकारिताको मर्म भुले ।
बिरामीको पीडा र संवेदना बुझ्नु एउटा कुरा हो, त्यसलाई समाचारमा उतार्नु पनि स्वागतयोग्य हो तर त्यसलाई तोडमोड गरेर ‘सेन्सेनल’ बनाउनु गलत हो ।
दुई बीच एउटा मसिनो घेरा छ । त्यसलाई संवाददाताले मेटे पनि कान्तिपुरको सम्पादकीय टोलीले त्यसको ख्याल राख्नेछ भन्ने अपेक्षाका साथ यो छोटो प्रतिक्रिया मेल गरिदिएको छु ।
Subhas Lamichhane Bimal dai: यो समाचार लेख्दा तपाईंले सम्बन्धित चिकित्सकसँग उसको 'अपिनियन' पनि लिनुभएको भए र यथार्थमा त्यो पाइप कस्तो पाइप हो भन्ने पनि 'रिसर्च' गर्नुभएको भए अन्य चिकित्सकलाई यो समाचारप्रति आशंका गर्नुपर्ने स्थिति आउँदैनथियो ! किनकि पत्थरीको अपरेसनको क्रममा दूरबिनको सहायताले पिसाबथैलीदेखि मृर्गौलासम्म डिजे स्टेन्ट (DJ Stent) नामको कृत्रिम पाइप राखेर छाड्नु उपचारकै अंग हो ! फलोअपमा बोलाएको बेला अवस्था हेरेर दुई-चार हप्तापछि मात्रै यो पाइप निकालिन्छ ! यो नै 'स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस' हो !See Translation
Baduwal Dipendra अनि गुच्च खेलेर रेडियोलोजिष्ट बनेको होला र त्यो । देख्दै नदेख्ने । यहां उपचार प्रक्रियाका बारेमा समाचार छैन । एक पटक पढनुस ।See Translation
Bimal Khatiwada चिकित्सकले पाईप राखेको कुरा नै विरामीलाई जानकारी दिएनन । पटक पटक अस्पताल पुग्दा समेत चिकित्सकले एलटै औषधी थपेर पठाईदिए,तर पाईप भएको कुरा जानकारी गराएनन । पछि उपचार गराएकै अस्पतालमा भिडियो एक्सरे गर्दा केही नभएको रिपोर्ट आयो । बाहिरको अस्पताल र निजी मेडिकलमा एक्सरे गर्दा पाइप देखियो । यो कुरा पहिला नै चिकित्सकले किन विरामीलाई भनेनन ? किन अस्पतालले विरामीको पेट भित्र पाईप हुंदा नी केही छैन भनेर गलत रिपोर्ट दियो । यो लापरबाही होकी होईन ? अस्पतालले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाईन्छ र ?See Translation
Subhas Lamichhane रेडियोलोजिस्टले X-ray गर्दा त्यो पाइप देखेन भनेर म पत्याउन सक्दिन | तर सायद पाइप निकाल्ने समय भइसकेको थिएन होला जसकारण त्यो पाइप रहेको कुरालाई स्वाभाविक मानेर उसले त्यो कुरा भनेन | X Ray मा केही देखिएन भनेको त कुनै abnormal कुरा देखिएन भनेको हो ! Normal Organ हरु अनिउपचारकै लागि छाडेको पाइप त देखिहालिन्छ नि !
Subhas Lamichhane हरेक अपरेसनअघि बिरामीसँग ‘कन्सेन्ट’ अर्थात् मन्जुरिनामा लिइएको हुन्छ | DJ Stent राख्ने कुरा अपरेसनकै अंग भएकाले त्यसका लागि छुट्टै कन्सेन्ट लिनुपर्दैन | समाचारमा पाइप राखेको स्वाभाविक कुरालाई कैंची छुटेको कुराजस्तो बनाएर प्रस्तुत गरेकाले मानिसहरु भ्रमित भएका हुन् | केही छैन भनेर रिपोर्ट दिएको त केही abnormal कुरा छैन पो भनेको होला नि ! उपचारकै लागि भनेर राखेको पाइप छैन भनेर भनेको होइन कि ?See Translation
Bimal Khatiwada पाईप छ भन्ने कुरा विरामीलाई जानकारी गराउनु पर्छ पर्दैन ? अस्पतालमा पटक पटक झन झन विरामी भएर जाँदा चेकजाँच नै नगरी औषधी लेखिदिने कि अबस्था के भएछ भनेर बुझ्ने हो ? संधै अस्पतालमा जांदा केही छैन मात्र भन्ने,तर विरामी समस्यामा परी रहने ? अतिी भएपछि परिवारले डाक्टरले ठिक पार्न सकेनन भनेर धामीझांक्री सम्म पुग्नु परो । के रहर थियो होला त उहाहरुलाई पनि पटक पटक अस्पताल आउन अनी धामी झांक्रीकोमा पुग्न ?See Translation
Subhas Lamichhane त्यो पाइपका केही Complications हुन्छन् जस्तै पेट दुख्ने, छिनछिनमा पिसाब लाग्ने, इन्फेक्सन हुने आदि ! तर ती डराइहाल्नुपर्ने खालका हुँदैनन्, temporary हुन्छन् र पाइपको उपादेयता सकिएसँगै पाइप निकालेपछि ती समस्या पनि सकिन्छन् ! त्यतिन्जेल औषधिबाटै ती complications हरु manage गरिन्छन् ! डाक्टरहरुले यी कुरा बिरामीलाई राम्रोसँग बुझाउन नसकेको हुनसक्छ, त्यो डाक्टरको कमजोरी हो !See Translation
Subhas Lamichhane तर पेटमा पाइप छाडियो भनेर misleading headlines बनाएर समाचार प्रकाशित गर्नु तपाईं संवाददाताको मात्र होइन, कान्तिपुरको स्वास्थ्य बिट अनि सम्पादक टोलीकै कमजोरी हो ! किनकि त्यो पाइप बिर्सेर त्यहाँ छाडिएको होइन, उपचारकै अंशका रुपमा जानीबुझिकन राखिएको हो ! अपितु, बिरामीलाई यसबारे सम्प्रेषण गर्ने सवालमा डाक्टरको कमजोरी भएको हुनसक्छ !See Translation
Bimal Khatiwada यो मानव स्वाथ्यमाथीको खेलबाड हो । पटक पटक विरामीले चिकित्सकलाई के भएको हो ? किन संधै विरामी मात्र भईन्छ भन्दा चिाकित्सकले किन विरामीलाई राम्रोसंग काउन्सीलिङ गरेनन ? किन पेट भित्र यस्तो पाईप छ, यसले यस्तो गर्छ भनेन ? विरामीलाई किन संधै पीडा दिएर मानसिक रोगी झैं बनाए ? तपाईले जस्तै सल्लाह किन ति चिकित्सकले दिन सकेनन ? मेरो कुनै अस्पताल र चिकित्सकसंग दुश्मी होइन, तर उपचारका नाममा विरामीलाई पीडा दिन पाईन्न ? के अस्पताल चिकित्सक बस्नका लागि मात्र खोल्या होर ? विरामीलाई सेवा दिन खोज्या भए त राम्रोसंग उपचार गर्नु परो नि । अस्पताल भित्र एक्सरे गर्दा पेटमा राखिएको पाईप नदेखिने,बाहिर देखिने हुन्छ ?